Kubudirira pashure pekukundikana
Yakatumirwa ne Tranquillus | Jan 20, 2018 | Kuvandudza wega
Ko kana ndikakuudza kuti kukanganisa ndiko kutanga kwekubudirira kwako?
Tose takapinda kubudikidza nekukundikana. Unhu husingafadzi hunogadzirisa, kuora mwoyo, pfungwa yekusakwanisa kubudirira, kushamwaridzana kunokuudza iwe kuti hazviitike iwe ... saka saka zvakanakisisa zvingave kurasa?
Hanya manzwiro edu anotora nzvimbo yose pachikonzero chedu ... kuti tibude sei? Ndeipi nzira yekuenda nayo? Ndezvipi zvisarudzo zvokuita? Abandon? Kutsungirira? Bouncing?
Yese yemibvunzo iyi yakarurama, asi regai ndigovere ruzivo rwangu munyaya yacho; Mumaminitsi e3 iwe uchaona zvakavanzika zvekusimba kuti uite kukanganisa kwako munguva yemberi kubudirira. Hongu, nokuti kukundikana ndiyo nzira yakanakisisa yekudzidza. Isu tose tinoziva kuti ruzivo rwakakanganiswa uye kudzidza ndeimwe ye matanho ekutanga kubudirira. Vongai vhidhiyo ino, iwe uchaziva nezvekugona kwekukundikana kuitira kuti ubatsirwe nayo uye upenye zvakare mumishonga yako yakasiyana.
Muvhidhiyo iyi, uchawana pfungwa uye mazano achakubvumira kuti uwane nokukurumidza uye zvinobudirira ..., uye zvose izvo, mune zvishoma 5 points:
1) Lkutadza : chii ichocho?
2) Kunzwisisa kukanganisa kwedu : nokubvunza mibvunzo yakakodzera ... ikozvino!
3) Nzira yekuvakazve sei? Kuti ubudirire ...
4) Thekuzvikudza : zvakakosha kuenderera mberi mumabasa edu.
5) Mikana : Vagamuchirei uye rambai makatarisa!
Vhidhiyo ipfupi, asi ine simba iyo inobvumidza iwe kuti unzwisise zvirinani "iyo inotevera" kutadza uye nekudaro inokupa iwe kiyi dzebudiriro uye kugona kudzosera kumashure!
VERENGA Nzira yekuwanazve chikonzero chako shure kwenguva yakaoma?
Kubudirira pashure pekukundikana May 11th, 2018Tranquillus
pashureKutya Kwekutarisa Kwemwe-Ndezvipi Zvisiri Kukurwisa?
zvinoteveraZviri nani Kuita Basa Rako Nguva-Mafungiro uye Mazano
Ziva nzira yekuita zvisarudzo zvakanaka
Nzira yekugadzirisa zvinangwa zvinokwanisa sei?
Kubva Nenzira Yakaipa-Zvidzivirire Nezvakaipa Mavhinga
Kutya Kwekutarisa Kwemwe-Ndezvipi Zvisiri Kukurwisa?